कुन उमेरमा कति तौल हुनुपर्छ ? – Medianp
मङ्गलबार, १२, चैत, २०७५
कुन उमेरमा कति तौल हुनुपर्छ ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २५, २०७५०८:५९0
कुन उमेरमा कति तौल हुनुपर्छ ? – स्वस्थ रहनका लागि मानिसले उचाइमा जति ध्यान दिन्छ, त्यति नै उमेरअनुसारको तौलमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । शारीरिक विकासमा तौलको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कम वा बढी तौल हुनुसमेत शारीरिक रोग हो ।
उमेरअनुसारको सन्तुलित तौलले मानिस स्वस्थ रहेको मापन गर्छ । यसै विषयमा इन्डिया काउन्सिल अफ मेडिकलले उमेरअनुसार तौलको मापदण्ड तयार पारेको छ । भारत र नेपालका जीवनशैली तथा भूधरातल एउटै प्रकृतिको भएकाले नेपालीका लागि पनि यो सान्दर्भिक हुन सक्छ ।
त्यसैले यहाँ १८ वर्षसम्म मानिसको तौल कति हुनेबारे यहाँ उल्लेख गरेका छौँ । जसमा केटा र केटीको तौल फरक रहने बताइएको छ । बच्चा जन्मिएको दुई महिनासम्ममा शिशुको तौल ३ देखि ३ दशमलव ३ किलोग्राम हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, १८ वर्ष पुग्दा केटाको तौल ६५ र केटीको ५४ किलोग्राम हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ । तौललाई उमेरअनुसार यसरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ :
बुर्का लगाएरै बक्सिङ
‘चङ्गा’ र ‘मट्टीमाला’ सिनेमा हलमा, आफैंसँग जुधे बुद्धि तामाङ
95 − = 92
बच्चाहरुको नाम राख्ने बेला भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ८ गल्ती
यी हुन विश्वकै कामुक महिला राजनितिज्ञ, जसको बारेमा थाहापाउनुभयो भने उड्नेछ तपाईको होस् !
शरीरको बनावट अनुसार स्वस्थ रहनको लागी कस्तो हुनुपर्छ खानपान ? यता हेर्नुहोस् त एकपटक
‘हेपाटाइटिस बी’ समस्याबाट पीडित उपल्लो डोल्पावासी
सावधान ! खुट्टा हल्लाएर बस्ने बानी छ ? आजैबाट छोडीदिनुहोस् नत्र लाग्ला मुटु रोग , यसरी बच्नुहोस्
के तपाईलाई थाहा छ ? उभिएर पनि शरिरको बोसो घटाउन सकिन्छ
सावधान ! नङ टोक्ने बानी भएका मानिसलाई लाग्न सक्छ यस्तो खतरनाक रोग
कब्जियत निको पार्ने अचुक औषधी बन्दै अमला, यसरी गर्नुहोस प्रयोग
प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणको उपलब्धि, विदेश मन्त्रालयका तल्लो तहको कर्मचारीसँग भेट, कूटनीतिक मर्यादा बिर्सिए
जाजरकोटका अस्पतालमा उपकरण छ, चिकित्सक छैन
दक्षिणकालीबाट रत्नपार्क आउँदै यात्रुबाहक बस दुर्घटना, २४ घाइते
देश मुठभेडतर्फ, विप्लव समूहले दियो सरकारलाई चैत्र मसान्तसम्मको अल्टिमेटम, नेपाल बन्दको घोषणा
हुम्लामा हिमपात, एसइई परीक्षार्थी समस्यामा
भोलिसम्म मेघगर्जनसहितको वर्षा हुने
बझाङमा बौलाहा स्यालको आतङ्क
मुग्लिनबाट छुटेको बस त्रिशुली नदीमा खस्यो
प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण करिब ३३ हजार
पर्यटनमन्त्री अधिकारीसहित सातजना बोकेको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेपछि भएको सिट हटाउने निर्णय उल्ट्याउने प्रयास
गृह मन्त्रालयकाे सहसचिवकाे नाममा साढे पाँच कराेड ठगी